Macluumaad Xiiso Leh In Badana Aad Kaheli Doontid Nala Akhriso!! – Filimside.net
1-Ma ogtahay xaaskada markee ifur ku leedahay inta badan daacad kama ahan oo ma rabto inaad furto balse ee waxay tijaabineysaa jaceylka u qabto iyo inaa ku dag-dageeso furiinkeda waana hubka ay adeegsato erey ahan “I FUR.”
2-Sacad Binu Mucaad oo kamid ah saxaabadii Rasuulka SCW ee ansaarta markuu geeriyooday carshiga Alle ayaa gariiray sido kalena janaasadiisa waxaa ka qeyb gashay 70,000 (Todobaatan kun) oo malag 7 samo ayaana loo furay oo ruuxdiisa lagu soo dhaweeyay markuu geeriyooday Alle haka raali noqdo saxaabiga qaaliga ah.
3-Caalamka sanad walba kudhowaad 500 qof ayaa u geeriyoota sababo la xariira inee sariirta kasoo dhacaan markee hurdaan waxaa macquul ah in aad dhowr jeer kasoo dhacday Alle-na ku badbaadiyay.
4-Daraasaad waxaa lagu ogaaday in xanjada ka hortagto xanuunka markaa basasha jar-jareyso sidaa aawged xabad xanjo afka gasho marwalbo basal jar-jareeyso.
5-Mala socotaa ereyga OK inuu kamid yahay ereyada ugu isticmaalka badan dunida maanta waddankaa doonto kasoo jeed waa qasab inaa ereygan isticmaasho.
6-Nabiga Scw Mucjisooyinkiisa waxaa kamid ah inuu hada kahor geed meel taagan u yeeray kadibna geedkii oo socda u yimid waxuuna weydiiyay kuma ahayaniga geedkana waxuu ku jawaabay “waxaad tahay Rasuulkii Alle” hadde saxaabada indhahooda ayee ku arkeen falkaan dhacaayey.
7- Shaaha waa Energy halka caanaha uu yahay Protein hadaba Energy+Protein= Fat sidaa aawged shaaha cadeeska ah waxuu kamid yahay waxyaabaha lagu caylo.
8-Magaalada ugu horeeysay ee la duqeeyay qaarada Africa waa magaalada Taleex ee gobolka Sool kuna taala dalkeena Soomaaliya sidaa aawged Soomalia waa wadanka kowaad qaarada Africa taariikh ahaan la duqeeyo.
9-Dalka India dhanka fanka maqaamka uu Amitabh Bachchan (Cali dheere) ka gaaray wali atoore gaaray maqaamkaas majiro kuwii ka horeyeen, kuwii la tartamayeen iyo kuwii ka dambeyeenba waana atooraha ugu awooda badan taariikh ahaan India (Bollywood+Koonfur) aduun weynaha waxay ku qeexaan ninkaan “One Man of India.”
10-Ragga Soomaalida waxay jecel yihiin xaasaskooda inee marwalba ka farxiyaan oo iyaga ayee u shaqeyaan lacag badan ayee tabcaan balse wxay ka gaabiyeen dhanka jaceylka iyo soo jiidashada kaliya inta badan ninka iyo naagta waxay kulmaan xiliyada cunnada iyo xiliga furaashka balse waxaa meesha ka baxday jaceylkii iyo soo bandhigashadiisa.
Caalamka waxay nooga duwan yihin ninka iyo xaaskisa waa kuwa inta badan jaceylka u nugul xiliyo gaar ah ayee leeyihiin maalin aysan waan kujeclahay is dhaheenin majirto hadiyaha kadiska ah, balamo gaar ah, iyo kaftan xiiso leh intaba wey la yimaadaan iyo kuwa kale..
Qodobkee ka heshay nala wadaag…
Waxaa Aqrisay 628
anas sidali says: